M-weyne ku xigeenka & Weftigiisii waxay Qurba jooga Ingiriiska waxay ka dhex abuureen Isku-duubni | Salaan Media
M-weyne ku xigeenka & Weftigiisii waxay Qurba jooga Ingiriiska waxay ka dhex abuureen Isku-duubni
(Qaaybtii 1-aad) W/Q: Eng. Hussein Adan Igeh |Hussein Deyr
Marka hore, mahad oo dhammi waxay u sugnaatay Rabigeenna Weyn ee inaga dhigay ummadda aynu nahay ee Jam. Somaliland, inaguna galladay nimcooyinkiisa badan ee ay ka mid yihiin nabadda, wada-noolaanshaha, horumarka iyo weliba hanka iyo himilada ummadnimo ee shicibka JSL astaanta u ah.
Marka labaad, waxaan hambalyo baaxad leh iyo bogaadin kal iyo laab ah u dirayaa dhammaanba ummadda Jam. Somaliland gudaha dalka iyo dibeddaba, sida wadanninimada iyo dadnimadaba leh ee ay u xuseen una xurmeeyeen 22 guurada Maalinta Qarannimada Jam. Somaliland 18-ka May , taasoo ay ugu quus-gooyeen cadowga noocyada badan leh ee Jam. Somaliland.
Marka saddexaad, waxaan M/weynaha JSL Mudane Ahmed M.M. Silaanyo iyo Golaha Xukuumaddiisaba ku hambalyeynayaa sida hufnaanta iyo hawl-karnimadaba leh ee ay uga hawl-galeen qaban-qaabada iyo qabsoomidda Maalinta Qarannimada ee18-ka May gudaha dalka iyo dibeddaba. M/weyne Ahmed Silaanyo iyo Xukuumaddiisu waxay ammaan iyo maamuusba ku mutaysteen: sida ay kor ugu qaadeeen meeqaamka Maalinta Qarannimada; sida ay weftiyo ugu kala direen dalka gudihiisa iyo daafaha dunida; sida ay nabad-gelyada iyo kala dambayntaba u sugeen.
2. Kaalinta Muuqata ee Qurba-Joogga Somaliland ee Ingiriiska:
Ummadda Somaliland iyo dalka Boqortooyada Ingiriiska waxa ka dhexeeya xidhiidh qoto dheer oo soo jireen ah. Dalka Ingiriisku waxa uu hoy u yahay Bulshada Somaliland ugu badan ee ku nool dal dibedda ah. Muddo ka badan 100 sano ayey bulshada JSL ku noolaayeen oo ay degenaayeen dalkan Ingiriiska. Bulshada reer Somaliland ee ku nool Ingiriisku waxay door muhiim ah ka soo qaateen halgankii dib u xoraynta dalka hooyo, iyagoo naf iyo maalba u horay in JSL ay mar kale la soo noqoto madaxbannaanideeda. Sidoo kale waxay kaalin lama ilaawaan ah ka soo qaateen (illaa haddana ay kaga jiraan) dib u dhiska, dhaqaalaha iyo maal-gashiga dalka iyo weliba ta ugu muhiimsan oo ah kaalinta ay kaga jiraan dedaalka qadiyadda ictiraaf raadiska iyo gooni isu taagga Jam. Somaliland.
Haddaba, damaashaadkii Xuska iyo Xurmaynta Maalinta Qarannimada Jam. Somaliland 18-ka May ee ka dhacayey magaalooyinka kala duwan ee dalkan Ingiriiska waxay ummadda JSL ee ku nool Ingiriisku nasiib u heleen inay Xuska 18-ka May kala qayb galaan Wefti heer Qaran ah oo uu hoggaaminayey M/weyne K/X JSL Md. C/raxmaan C/laahi Ismail (Saylici). Weftigaasi oo ka koobnaa xubno ka tirsan golaha Wasiirada iyo masuuliyiiin kale oo xukuumadda ah, golaha wakiilada, la taliyeyaasha Madaxweynaha, Safiirka wareega iyo Safiirka JSL ee UK.
Si aan qiyaas lahayn ayey bulsha weynta Somalilnad ee ku nool dalkan Ingiriisku u soo dhaweeyeen uguna farxeen in M/weyne ku xigeenka JSL iyo waftiga culus ee uu hoggaaminayey ay kala qayb-galeen Xuska iyo Damaashaadka Maalinta Qarannimada Jam. Somaliland 18-ka May. Dabcan way jirtaa in marar badan oo hore ay Madaxweynaha JSL iyo wefti uu hogaaminayey booqosho ugu yimaadeen dalkan Ingiriiska. Balse M/weyne ku xigeenka JSL safarkiisii ugu horreeyey ee qaaraddda Yurub wuxuu go’aansaday inuu ku yimaado dalkan Ingiriiska, taasoo bulshada reer Somaliland ee ku nool dalka Ingiriisku ay u arkaan in iyaga si weyn loo sharfay oo la siiyey mudnaan gaar ah.
3. M/weyne K/X iyo waftigiisu waxay xoojiyeen isku-duubnida Bulshada:
M/weyne ku xigeenka iyo weftigiisu markii ay soo caga-dhigteen London waxaa si aan qiyaas lahayn u soo dhaweeyey dhammaan bulshada JSL ee deggen dalka Ingiriiska iyaga oo isku duuban oo mid ah. In kasta oo M/weyne ku xigeenka iyo weftigiisu ay aad u daalanayeen oo ay soo galeen safar iyo socdaal dheer oo maalmo qaatay, haddana waxay isla markiiba u tabaabulshaysteen sidii ay uga qayb geli lahaayeen Xafladaha Sanka Isku Hayey ee Xuska 18-ka May.
Xafladiba waxay u dhiibtay xaflad kale! Waqtiga ay Waftigu bulshada damaashadaysa la qaadanayeen aad ayuu u dheeraa.
Xiisaha iyo Xamaasadda bulshada u dabaal-degaysa Maalinta Qarannimada Jam. Somaliland 18-ka May wuxuu ahaa mid aad u sarreeya! Salaanta iyo Sawirrada ay bulshadu ka qaadanayeen M/weyne K/X iyo waftigiisa may lahayn xad! M/weyne ku xigeenka iyo weftigiisu waxay muujiyeen samar iyo dulqaad ay Bulshadooda ku soo xoomaysay u samrayeen! Waxay ku dedaalayeen inay qof walba raalli gelinayaan isla markaana ay siiyaan waqti ay kula hadlaan haba koobnaadee. Meeqaam iyo maamuus aad u sarraysay ayaa ka muuqatay M/weyne ku xigeenka iyo weftigiisa, iyagoo si wada jir ah u hagayey Xuska Maalintan qiimaha leh, tallaabo-tallaabana ula socday kolba halka uu xaal marayo. Wadajirka iyo wada-shaqaynta ka muuqatay M/weyne ku xigeenka iyo weftigiisa waxay dhiirri gelisay guud ahaanba Bulshda JSL ee ku dalkan Ingiriiska inay iyaguna isku duubnaadaan oo ay si wada-jir ah wax u wada-qabtaan!!
INSHA ALLAH BI IDMILLAAH; La soco Qaybta 2-aad:
(M-weyne ku xigeenka JSL iyo Waftigiisii waxay Muujiyeen Xil-Gudasho la yaab leh, Qurba jooga Somaliland ee Ingiriiska deggenna waxay ka dhex abuureen Isku-duubni, Wadajir iyo Walaalnimo.)
W/Q: Architectural-Eng. Hussein Adan Igeh |Hussein Deyr|